Banike iSundowns ithuba lokuvula igebe iSuperSport neSwallows bebambana - Impempe
Banike iSundowns ithuba lokuvula igebe iSuperSport neSwallows bebambana
UTlakusani Mthethwa weSwallows obe nguMdlali oVelele bebambana neSuperSport United ngoMgqibelo
Alikho eligxume lafika eduze kweMamelodi Sundowns njengoba isaphambili ngamaphuzu amabili kulandela ukuthi iSuperSport United neSwallows FC bedlale ngokulingana emdlalweni weDStv Premiership eLucas Moripe Stadium ngoMgqibelo ntambama.
Bekubukeka kukhona ozonqoba, agxume awafice amaSandawana ngesikhathi umdlalo uqala kodwa kwasho khona ukuthi zinkunzi zombili ayangaba khona efuna ukugoba uphondo.
Lokhu kunike iSundowns ithuba elihle lokuvula igebe lamaphuzu amahlanu phezulu, nokho lokho kuncike ekutheni ishaye iChippa United abazokhiphana nayo inkani emdlalweni weligi ngeSonto.
ISuperSport isheshe yakhombisa ukuthi awasiniswa amahleza ePitori njengoba ishaye igoli kusaphele imizuzu eyisithupha kuphela umdlalo uqalile.
Ithole i-free kick, ibhola lawela Lucky Mohomi, wadonsa intambo lakhala enethini kwaba ngu 1-0. Ngemuva kwalokho ivuke yazithatha iDube Birds futhi kunqabe inhlanhla nje – nonozinti waMatsatsantsa a Pitori obengazibekile phansi – ukuthi kuze kuyiwe ekhefini bengakalitholi elokulinganisa.
ISwallows iqhubekile nokuzama ukubuya futhi beyiwakha amathuba kodwa kwale ukuthi iwuqedele umsebenzi ngokuthi inamathisele ibhola enethini.
Kuze kwagcina kuyilungele nokho ngomzuzu ka-73 ngesikhathi uJoseph Mhlongo – obesuka ebhentshini – efika enza umehluko eshaya igoli lokulinganisa.
Ngemuva kwalokhu, iwatholile amanye amathuba kodwa kwayikho ukuthi kwesinye isikhathi izinto azikuvumi. NaMatsatsantsa abenawo awawo amathuba kodwa nakuwo kwayiso leso.
Kodwa azokhala ngonompempe Amatsatsantsa ngemuva kokuthi encishe uBradley Grobler igoli lakhe lika-13, neqembu elokuwina ethi lo mgadli ubesesendaweni engamfanele ngesikhathi ebhakuzisa inethi ngomzuzu ka-91.
Previous Previous post: Ikuphindile lokho iPirates ishaya iChiefs kowoMkhaya
Next Next post: Ukhala ngephenathi ‘ecace bha’ ephikiwe uZinnbauer wePirates